World Series pamusoro Poker Online Hack Chip jenareta 2017 | HacksDirect
Gunyana 2, 2017 Uncategorized
Ose pokeria dzinoshandisa vangada kuridza Poker kwemaawa vakawanda zvaanoshaiwa. Pane nzvimbo idzo kukupa kutamba tenesi neshamwari dzako uye nevamwe. zvisinei, uchava kusiya imba yako kuitira kuti kune nzvimbo. The pokeria mutambo kuchaitawo vanodawo kuti kuwana kupembedza nguva kuva kuwana pamwe chete neshamwari dzako. saka, avo Poker vanoda vasingakwanisi kubuda nguva dzose vanoda chigadzikiso runovabvumira kuridza Poker mukati musha. Ngationei ndikuudzei pokeria mutambo iro rega une zvakanaka zvakaitika Poker, uye ungadai asina kuva kusiya chigaro chako ndoda musha wako.
World Series pamusoro Poker (WSOP) ndiyo mhinduro matambudziko ako Poker. WSOP chinhu paIndaneti mutambo iyo rega zvaunazvo yose pokeria mafaro paunenge wakagara mumba yenyu pasofa yako. WSOP anoshanda akanaka vose Android uye iOS namano. Simply kuenda Anwendung kuchitoro kana kutamba chitoro wako akazochena foni uye kutaipa World Series pamusoro Poker, kukopa mutambo uye ngaiparadzanise gadza. Kana mutambo iri yakaiswa, une pokeria imba yako pachako yenyu foni. Zvino unogona kuridza Poker pose uchida, ngazvive Lounge yenyu, bhedhuru, hofisi kana kunyange panze. Just tinya icon iri yako foni uye kupinda munyika pokeria nyika. Unogona kutamba mutambo somueni, kana iwe unogona danda mukushandisa kwako Facebook nyaya iyo ichava (kwedu mafungiro) mafaro kupfuura achitamba somueni.
Hapana mitemo yakananga kuridza World Series kuti Poker, chete kupinda mutambo uye kutanga kutamba dzose Poker akafanana waizvisunga kuridza muupenyu pokeria. World Series pamusoro Poker ari akakurumbira sezvo nhamba vanoshandisa ari kukura zuva nezuva. Zvinobatsira WSOP kunyanya pakuti kufanana ne chaicho upenyu pokeria. Kune kupesana kuduku, asi misiyano iyoyo ndivo izvo kuti mutambo kunyange zvinonakidza, vave nechekuita uye mafaro kutamba. The misiyano uye zvakafanana pamusoro World Series pamusoro Poker pamwe chaihwo upenyu pokeria ndivo izvo kuti mutambo yakadiniko.
The mutambo anopawo mashoma nakisa inotonhora uye nakisa mafaro zvinhu izvo achachengeta minwe yako glued yako vakachenjera foni atambe World Series pamusoro Poker. Vamwe inonakidza zvinhu zvinosanganisira Tournaments, Facebook kubatanidza, evanhu chinoumba, Free Chips, Tournament Ring, multi-tabling uye zvakawanda.
The mutambo kunyanya ane kunopfuurira Tournaments izvo vachikubvumira kutamba Poker sezvo makwikwi. Tournaments aya mazita maguta akasiyana mhiri nyika. Panewo nemwaka Tournaments ayo ari kuenda kwemakore. Unongofanira kuzarura mutambo, kupinda mune mutambo kupinda pakati chinovhara. Kupinda mutambo uye kutanga kutamba dzose Poker.
Izvi kuti nakisa inotonhora uye yakanakisisa chinoratidza World Series pamusoro Poker nekuti kana kuhwina mutambo, muchaiswa rin'i. Unogona kuchengetedza mhete nokusingaperi nokuda ndizvo chaizvo mutambo, uye mhete zvichabviswa kuratidzwa pedyo zita renyu kana munhu achishanyira renyu Profile. Ko kuti zvikuru?
Playing vamwe mutambo, muchaona kuti zvakawanda kunetsa kumirira apo anokumhan'arira wako kutora chijana chake. Iwe chete achagara aripo mudzivisi kupedzisa chijana chake. zvisinei, haufaniri kumirira zvakare nokuti Nyika Poker Series unokubvumira Multi-tafura panguva. Zvinoreva unogona kuridza musi mumwe tafura apo anokumhan'arira wenyu kutora chijana chake.
Uchange paakavapa vakasununguka Chips ose awa uye kana uri kutamba kuwedzera Chips uchava kumirira iwe. chip Ava chaizvo zvinokosha World Series pamusoro Poker nekuti uchada izvi kuti mberi mune mutambo
The Social chinhu
Asi unganetseka kuti kuti sei mutambo anogona kukuita pasocial, asi World Series pamusoro Poker unokubvumira Chat yako mupikisi uchishandisa Emoticons. Kana iwe danda mukushandisa kwako Facebook nhoroondo, unogona kutamba munhu kubva pasi pose (richauya kwamuri kushamisa). Nyika Poker Series ane mamiriyoni vanoshandisa kubva pasi rose, kuti ndicho chikonzero iwe unogona kutamba munhu kubva Asia kuna Australia.
Kana waita Logged kuti World Series pamusoro Poker kushandisa kwako Facebook nhoroondo, pane vamwe zvikomborero izvozvo. Unogona kutamba kwenyu Facebook shamwari uye kunakidzwa zvako. Unogonawo kuponesa kwenyu mberi uye udzawo shamwari dzako. Kugoverana Kukunda dzako neshamwari dzako uye vachipemberera zvakawanda zvinonakidza kupfuura vachipemberera oga.
World Series kuti Poker zvinowanika 4 kuti 5 nguva pane kumhanya chaiyo upenyu pokeria, uye kana ukashandisa pfungwa multi-tabling, nokukurumidza uchava 20 nguva mhanyisa.
World Series pamusoro Poker vakasununguka Chips jenareta
Game anogona kuva zvechokwadi muropa kamwe iwe kuwana Hang kwayo. Vazhinji vatambi vanoshuma kuridza mutambo kwemaawa pasina kuwana vaneta. zvisinei, vatambi zvakare kufunga kuti vakasununguka Chips iri mutambo havasi kukwana kwavo uchitamba mutambo zvinodiwa uye dzinomhanya kubva Poker Chips nokukurumidza. WSOP anokupa ukatenga Chips izvi kadhi rako rokubhengi, asi kuti hazvisi noitika zvose mutambi. Unogona kuva risina parinogumira kupiwa rusununguko Poker Chips kushandisa kwedu turusi. World Series pamusoro Poker vakasununguka Chips jenareta ndiyo mudziyo pachena Chips chizvarwa. Zviri nyore kushandisa, uye unotofanira kuwana kuti mudziyo, kupinda dzenyu zvaida mari chips achizviendesa vaunze. Uchava yenyu vachishuva uwandu machipisi kwenyu WSOP nhoroondo. The turusi anoshandira zvakanaka zvose Android uye iOS namano saka chero mutambi anogona kurishandisa.
Zvino tora kwenyu foni uye tichinakirwa World Series kuti Poker chero uchida uye regai yedu sando kunetseka pamusoro wako Poker Chips.